धनीका कुरा : बेजोस सबैभन्दा धनी जुकरबर्ग चौथो नम्बरमा, विश्वकै धनी व्यक्तिमा आफूलाई अझै दर्‍याए जेफ बेजोसले ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta: Nepali News Portal
धनीका कुरा : बेजोस सबैभन्दा धनी जुकरबर्ग चौथो नम्बरमा, विश्वकै धनी व्यक्तिमा आफूलाई अझै दर्‍याए जेफ बेजोसले !
प्रकाशित मिति २८ पुष २०७४, शुक्रबार १४:३० लेखक नेपाली जनता
काठमाडाैं । अमेजन डट कमका फाउन्डर जेफ बेजोस माइक्रोसफ्टका फाउन्डर बिल गेट्सलाई पछि पार्दै लगातार तेस्रोपटक संसारकै धनी व्यक्तिको सूचीमा परेका छन् । अमेजनको कमाइ लगभग १ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर बेजोसले विश्वकै धनी व्यक्तिमा आफूलाई अझै दर्‍याएका हुन् । ब्लुमबर्गका अनुसार विश्वका पाँच धनी व्यक्ति यी हुन् :
आज चार बजे नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखलाई शपथ
काठमाडौँ । राष्ट्रपति…
प्रहरी कार्यालयभित्रै अनैतिक काम गर्ने प्रहरी जवान र एक स्थानीय महिला पक्राउ
रौतहट । रौतहटको डुमरिया ईलाका प्रहरी कार्यालय भित्रै यौनजन्य गतिविधिको प्रयास गरेको भन्दै प्रहरी जवान र एक…
पेट्रोलपम्पमा लाइन लाग्यो
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा फेरि तेलको अभाव सुरु भएको छ । धेरै पम्पहरुमा तेल वितरण भएको छैन भने वितरण…
रेल सेवा अध्ययन गर्न भारतीय टोली आउँदै, रुपैडिहास्थित रेल स्टेसनबाट अध्ययन सुरु गर्ने तयारी !
नेपालगन्ज । राँझा विमानस्थल हुँदै कोहलपुरसम्म रेल सेवा विस्तार गर्न भारतीय अधिकारीहरूले स्थलगत अध्ययन गर्ने भएका छन् ।
भारतको गोरखपुर र…
६२ वर्षको बुढो पति छाडेपछि अब रेखाको ध्यान राजेशमा !
काठमाडौं । उमेरले ४२ पुगेका भर्सटाइल गायक राजेशपायल रार्य र ६२…
कर फछ्र्योट आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकालको अदालती बयान सकियाे
काठमाडौँ । अनियमित ढङ्गबाट कर मिनाहाको आरोप लागेका कर फछ्र्योट आयोगका…